प्रदेश २ मा नेकपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै अब के हुन्छ ? « Lokpath
प्रदेश २ मा नेकपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै अब के हुन्छ ?
धनुषा – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आज प्रदेश २ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
तत्कालीन एमालेका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले आजदेखि शुरु बर्खे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा संसद् अवरुद्ध गरे । मण्डलले भने, “मोदी भ्रमणका बेला विपक्षीलाई बेवास्ता गर्ने सरकारलाई हाम्रो समर्थन हुँदैन ।”
त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र मण्डलले पनि सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको बताए । उनले सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको र भ्रष्टाचारका भागी आफूहरु नबन्ने भन्दै समर्थन फिर्ता लिएको बताए ।
प्रकाशित मिति: २०७५,जेष्ठ,१३,आईतवार १६:२६
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसै वर्षभित्र मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौं उपत्यका ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा